Barcelona oo qamaar dhanka suuqa galaysa si ay weerarkeeda xal ugu hesho
Thursday, April 25th, 2019 - 13:27:52
Monday November 26, 2018 - 13:58:20 in Wararka by Hussein Hadafow
Barcelona ayaa rajo wanaagsan ka qabta in laacibkeeda Demebe uu qayb ka noqdo qorshaha ay dib ugu soo celinayso garoonka Camp Nou.
Wararka todobaadkan soo baxay ayaa tilmaamaya in Bacrelona ay danaynayso in dib ula soo saxiixayo Neymar , kaasoo sanadki hore PSG ug biiray qiimihi ugu badnaa ebid laacib kubadda cagta ah lagu iibsado.
Dembele ayaa Barceloba ugu soo biiray si uu badal ugu noqdo Neymar, laakiin laacibka heerka caalami ee dalka faransiiska ayaa dhaawac ku seegay inta badan bilowga horyaalkii ugu horeeyay waxayna taassi sababtay inuusan noqon dooqa macallin Ernesto Valverde.
21 jirkan ayaa5 gool dhaliyay lixdii kulan ee uguhoraysay xilli ciyaareedkan, basleanshaxiixa oo liita oo ay u dheertahay isagoo tababarka kasoo daahaay Barcelona u aragtay xal in ayiska fasaxdo.
Demebele ayaa dhawaankooxdiisa waydiistay in la fasaxo bisha janaayo, waxaanalala xiriirinaya kooxaha Arsenal iyo Liverpool, hase yeeshee Goal.com waxuu aamisanyaha in ay Barcelona u istcimaali doono qorshaha qiimaha sare ay dib ugu soo celinayso Neymar oo hadda PSG ka tirsan.
Neymar ayaa dhawaanahan la hadal hayay inuu dib ugu laabanayo horyaalka Spain ,waloow kooxda ay Barcelona xafiltamaan ee Real ay ku cadcadayd inuu ku biiro.
Laacibka reer Brazil ayaa 105 gool u dhaliyay Barcelina 186 kulan oo uu u saftay.